Mpanao asa tanana: ahitana sokajin-taona rehetra | NewsMada
Koperativa Taratra Artisanat Malagasy (Kotarma), hita any amin’ny faritra maromaro : Amoron’i Mania, Vakinankaratra, Matsiatra Ambony miezaka ho matihanina amin’ity sehatra iray ity. Efa nisy mpikambana ao amin’io koperativa io nanaraka fiofanana teto Antananarivo. Ahoana marina ny tontolon’ny asa tanana eto Madagasikara ?
Ho famantarana ara-dalàna ny mpanao asa tanana, nanaovana antontanisa mazava ny momba azy ireo, niaraha-niasa amin’ny minisiteran’ny Toekarena sy ny tetibola ny nanatanterahana izany. Fantatra izao fa 482 929 ny isan’ny mpanao asa tanana matihanina, tsy manana antom-pivelomana afa-tsy ny asa tanana. Ny mpikambana ao amin’ny Kotarma nanaraka fiofanana momba ny fanavaozana, lafiny teknika sy fifampiraharahana amin’ny mpamatsy vola. “Mila hamafisina ny fahaiza-manao sy ny fampiroboroboana ny Vita Malagasy”, hoy ny tale jeneralin’ny Asa tanana, i Kajaly Audace.
Mikendry ny hanatsarana hatrany ny kalitao “Vita Malagasy” ny mpiandraikitra ny asa tanana ao amin’ny minisitera, indrindra ho fampahafantarana ny mampiavaka ny faritra. Ny minisitera rahateo mametraka fiaraha-miasa amin’ny Antenimieran’ny Varotra sy ny indostria sy ny « Chambres des Professions et d’Artisanat » ho fampandrosoana ny any amin’ny faritra. Fihariana iray mila tohana ny asa tanana, ahitana ny fiantraikany eo amin’ny toekarena malagasy. Ahafahana mampanaraka azy ireo ny fivoaran’ny teknolojia, mora ahafantarana azy rehetra, indrindra ny ataony sy ny faritra misy azy.
Misy hatramin’ny ankizy
Betsaka ny tanora mpanao asa tanana, eo anelanelan’ny 25 sy 30 taona no maro anisa indrindra, 16,1 %. Midika izany fa mbola ao anatin’ny tanjaka sy ny fahazotoana ry zareo, afaka manavao sy mampitombo ny fahaiza-manao. Hita ao anatin’ity sokajin-taona ity koa ireo ankizy 15 taona. Manambara io tarehimarika io fa tsy vitsy ny ankizy “voatery” miditra sahady amin’izany fihariana izany, tsy mianatra na tsy afaka mianatra intsony. Ao koa ireo olon-dehibe maherin’ny 65 taona tsy maintsy mbola miasa amin’ny fahanterany noho ny tsy fananana.
Ao ireo mivelona amin’ny asa tanana, manao vadin’asa, noho ny tsy fahampiana ara-bola, ny karama voalohany antony hanaovana izany ; karazana fialam-boly kosa ho an’ny sasany ny fanaovana vadin’asa izay asa tanana izay. Saika ireo manao vadin’asa, tsy misy anatin’ny rafitra ara-dalàna, nefa maro anisa izy ireo. Tsy ny asa tanana ihany no misy manao vadin’asa fa fihariana maro noho ny tsy fahampian’ny fidiram-bolan’ny isan-tokantrano.